आनालाई फेरि अनमोलकै साथ खाँचो हो ? | ArtistSansar.com
अभिनेता अनमोल केसी स्टारर फिल्म ‘जेरी’ बाट डेब्यू गरेकी अभिनेत्री हुन् आना शर्मा । यो फिल्ममा अनमोलसँग उनको केमेस्ट्रीलाई दर्शकले औधि रुचाए । साथै, उनलाई सम्भावना बोकेकी अभिनेत्रीको रुपमा पनि हेरियो । कारण थियो उनको स्वभाविक अभिनय । डेब्यू फिल्मपछि उनले तत्कालै अर्को फिल्म भने गरिनन् । केही समय ग्याप लिएर दोस्रो फिल्म ‘ग्यांग्स्टर ब्लुज’ गरिन् ।
‘जेरी’ बाट सुखद डेब्यु गराएका कारण उनले अरु निर्देशकसँग काम गर्ने जोखिम नमोलेर पुनः हेमराज विसीसँगै सहकार्य गरेकी थिइन् । तर, अनमोलसँग सहकार्य टुट्नु हेमराजलाई फलदायक रहेन । न त आनालाई दोस्रो फिल्मको रुपमा ‘ग्यांग्स्टर ब्लुज’ रोज्नु सही निर्णय बन्न सक्यो । फिल्मले दर्शकलाई निराश बनायो । हलबाट उठेको पैसाले निर्माताको अनुहारको रंग उड्यो ।
भर्खर-भर्खर दोस्रो फिल्मको असफलताले दिएको गहिरो चोट मुश्किलले निको गरेर तंग्रिएकी थिइन्, उनी । तेस्रो फिल्म कोसँग र कुन ब्यानरको गर्ने भन्ने अन्योलताबीच उनले फिल्म ‘द म्यान फ्रम काठमाडौं’ साइन गरिन् । अमेरिकी अभिनेता जोसे म्यानुअलसँग उनको जोडी बाँधियो । नेपालका जामुद कलाकारदेखि बलिउड कलाकार गुलशन ग्रोवरसम्मले फिल्ममा अभिनय गरे ।
तर, तेस्रो फिल्म पनि बक्सअफिसमा नराम्रोसँग पछारिएको छ । नेपालको पहिलो हलिउड फिल्म भनिएको उक्त फिल्म यही चैत १ गते प्रदर्शनमा आएको थियो । ५ करोड बढीको लागतमा निर्माण भएको फिल्मले पहिलो हप्ता घरेलु बजारमा ५० लाख पनि छाप्न असफल रह्यो । पुनः दोस्रो फिल्म पनि सफल हुनबाट चुक्दा आनालाई फेरि अनमोलकै साथ आवश्यक रहेको चर्चा हुन थालेको छ ।
नेपालको पहिलो हलिउड फिल्ममा काम गर्न पाएको खुसी अनुहारमा फैलिन नपाउँदै विलाप हुँदा आनालाई फेरि एकपटक तंग्रिएर चौँथो फिल्म चयन गर्न समय लाग्ने देखिन्छ । उनी ठूलो फिल्म हातमा पर्‍यो भनेर हामफालिहाल्ने पक्षमा अब पक्कै नरहलिन् ! ठूलो लगानी र ठूला स्टार हुँदैमा फिल्म चल्दैन भन्ने उनले अब बुझेको हुनुपर्छ । आशा गरौं, चौथो फिल्मले उनलाई राहतको सास फेर्न दिनेछ ।